Monday April 22, 2019 - 17:02:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka ugu sarreeya dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay habacsanaanta ku timid howllaha shaqo ee dowladda arrinkaas oo saameyn xun reebay.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa ka shanqariyay in dowladdiisa ay lasoo darseen caqabado dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha ah.
Isagoo wadaadda xumayaal taageera maamullada dabadhilifyada ah kula hadlayay Muqdisho ayuu sheegay in dhaqaale xumada dowladdiisa heysata ay saameyn ku yeelatay shaqaalaha iyo howllihii laga sugayay sida uu hadalka udhigay.
Farmaajo ayaa dhaqaala xumada heysata dowladdiisa sabab uga dhigay Canshuurta laga qaado shacabka Muqdisho oo aan gaarsiisneyn sidii larabay balse waxaa xusid mudan in Wasiirka Maaliyadda uu dhowaan sheegay in lacago Malaayiin dollar ah ay dowladda ugasoo xarootay Muqdisho.
Cabashadan ayaa imaanaysa xilli kaabayaasha dhaqaalaha wadanka ay heystaan dowlado shisheeye sida garoomada diyaaradaha iyo dekadaha caalamiga ah oo dhammaantood loo gacan geliyay shirkado laga leeyahay wadamada Turkiga iyo Imaaraatka Carabta.